खगेन्द्र सङ्ग्रौला | Ratopati
गोयबल्सका यी गोर्खे औतारहरु access_timeसाउन ३, २०७७
‘एफपी अस्पतालमा चौबीस घण्टासम्म सोधपुछ गर्न कोही आएनन् । अस्पतालमा ट्वाइलेट प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाको थियो । खाना त कुकुरलाई जसरी दिइन्थ्यो । माइकिङ गरेर खाना बाटामा छाडिन्थ्यो । कुकुरलाई पनि यसरी दिँइदैन । माइकिङ गर्दा भनिन्थ्यो— तपाई्...
कोरोना गुञ्जन वाचाल, म अवाक्–अवाक् access_timeअसार १२, २०७७
म तर्सेर बिउँझिएँ । तन्द्रामा मलाई रमरम चेत भयो— कानमा केही गुनगुन–गुनगुन गरिरहेछ । सम्झेर ल्याउँदा यो परिचित झिँगो होइन । चिनिएको लामखुट्टे पनि होइन यो । आखिर यो हो के त ? आवाज बिरानो छ, कहिल्यै कतै नसुनेको जस्तो । सपना हो कि विपना हो यो ? म...
लकडाउन कहर, कोरोनाको जहर access_timeअसार १, २०७७
कागले सधैँ आफ्नो भाषा बोल्छ, र त ऊ सधैँ स्वतन्त्र भएर आकाशमा उड्छ । तर एउटा सुगाले अरुको नक्कल गरेर गुलामी गर्न खोज्छ, त्यसैले त ऊ सधैँ पिन्जडामा कैद रहन्छ ! — टवीटे लता नेउपाने यो ट्वीटमा ट्वीटे लताको ट्वीटरको निशाना कोही छ कि यो केवल एउटा ब्ल्याङ्क फायर हो म...
हर रोगका एक दबा चइना टाइगर बाम access_timeजेठ २८, २०७७
जीवनमा सजिलो हावमा कावा खानु हो म किमार्थ खान्नँ धरती टेकेर मातृभूमिको सेवा गर्नु छ । जीवनमा सजिलो लडखडाउँदै हरेस खानु हो &nb...
कोरोना कालमा छिमेकीको माया access_timeबैशाख १३, २०७७
दुई हप्ताको स्वैच्छिक गृह–क्वारेन्टाइनपछि मैले चैनको सास फेरेँ । धन्य श्री पशुपतिनाथ, अबलाई मैले यो खड्गो काटेँ । बहुविध ज्ञानीहरुले कानै खाने गरी दोहोर्‍याएर सुनाएको कुरा यस्तो थियो । ज्यानमा भाइरस सल्केको भए पहिलो हप्तामै लक्षण देखिन्छ । थप एक हप्ताको क्वारे...
बाहुबली स्वास्थ्य नीति, सरकारी नरकयात्रा access_timeबैशाख ४, २०७७
‘सरकारले बुझोस्— डाक्टर, नर्स रोबोट होइनन्, स्वीच अन गरको भरमा चल्ने । तिनलाई पनि अरु मान्छेलाई झैँ मृत्युको भय हुन्छ । तिनको पनि परिवार हुन्छ । आत्मसम्मान हुन्छ ।’ — सरिता तिवारी ००० नयाँ वर्षको आगमनसँगै कोरोना भाइरसको...
सरकार अस्वस्थ, स्वास्थ्य नीति बर्बाद access_timeबैशाख २, २०७७
कुरो सुन्दा मजा लाग्छ— हाम्रो सरकार खूब बोल्छ, र खुबै मीठो बोल्छ । तर जब यो हाई काड्दै काम गर्न खोज्छ, यसको व्यवहार र बोलीको र्‍याङठ्याङ मिल्दैन । भानुभक्त भन्ने कोही सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री छन्, स्वच्छ छाविधारी विरल मनुवा । यी अकवि भानुले भनेछन्— कोरो...
लुकिँदैन, लडिन्छ र जितिन्छ access_timeचैत ३०, २०७६
म न जनस्वाथ्यविद् हुँ न चिकित्सा शिक्षाको पण्डित । तैपनि सुझ न बुझ यो कोरोना कैरन कोर्दै म किन नजानेको बाटोमा हिँड्न खोजेको होला ? आफैँलाई कुरिकुरी गदै घरिघरि सोध्छु म । कोरोना कहरकालमा यो कैरन कोर्नुका दुईवटा कारण छन् । एउटा कारण फेसन हो, अर्को हो बाध्यता । पाँच व...
सरकारको अनुहार देखिने यो ऐना access_timeचैत २८, २०७६
भोका श्रमिकहरु जब सिंहदरबार र बालुवाटार दरबारको विश्वासघातको चोटले आहत हुन्छन्, उनीहरु निरुपाय भई सान्त्वनाका लागि पशुपतिनाथको मुख ताक्छन् । यसैकारण होला सायद अचेल एक हुल भोका श्रमिक सखारै सपरिवार पशुपतिनाथको मन्दिर जान्छन् र कसैले केही खान देला कि भनी दिनभरि भौँत...